Fahatsiarovana ny 29 martsa Hetsika tamim-pahanginana no natao
Noho ny fepetra noraisina amin’ny tsy fahafaha-mivoaka, dia tsy nisy ny famoriam-bahoaka amin’ny fahatsiarovana ny 29 martsa.
Tsy hisy olom-pirenena sivily maro manatrika afa-tsy ny Filoham-pirenena niaraka amin’ny Minisitry ny fiarovam-pirenena, ny sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimariam-pirenena, ny minisitry ny filaminana anatiny, ny Governoran’Analamanga, ny Ben’ny tanànan’Antananarivo,… no niatrika ny fametrahana fehezam-boninkazo tetsy fasan’ny Mahery fo Andrainarivo omaly, izay notarihin’ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina. Natao tao anatin’ny fahanginana tanteraka. Na ny mpanao gazety aza nomena toromarika tsy ho avy teny an-toerana, fa ny mpanao gazetin’ny haino aman-jerim-panjakana no nandrakotra ny lanonana tamin’ny ankapobeny. Tsy teto Antananarivo ihany fa saika nangina tanteraka tamin’ny ankampobeny ny fanamarihana ny tolom-panafahana tamin’ny 1947, izay tsaroana manokana isaky ny 29 martsa.